Los Angeles na Lome, Togo na-akwụsịghị na Ethiopian Airlines
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Los Angeles na Lome, Togo na-akwụsịghị na Ethiopian Airlines
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Togo • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ijikọ US West Coast na enweghị nkwụsị na West Africa bụ nke mbụ. Onye otu Star Alliance nke Ethiopian Airlines na-ebute ụzọ ma gbanwee ụzọ ogologo si Adis Ababa gaa Los Angeles iji gafee Lome, Togo dị ka nke 17 Disemba 2018 wee bido ụzọ ọhụrụ si Addis Ababa gaa Dublin gafee Madrid site na 15 Disemba 2018.
Ijikọ US West Coast na enweghị nkwụsị na West Africa bụ nke mbụ. Onye otu Star Alliance nke Ethiopian Airlines na-ebute ụzọ ma gbanwee ụzọ dị ogologo si Adis Ababa gaa Los Angeles iji gafee Lome, Togo dịka nke 17 December 2018 ma bido uzo ohuru si Addis Ababa rue Dublin gafere Madrid dika nke 15 December 2018.
Routezọ ọhụrụ a ga-abụ naanị na nke mbụ ụdị ya iji jikọta West Africa na West Coast nke USA na ụgbọ elu na-aga.
Zọ ọhụrụ a nke LAX site na LFW ga-arụ ọrụ dị ka usoro oge a: Flight
Maazị Tewolde GebreMariam, onye isi oche nke ụgbọ elu Ethiopian Airlines kwuru, sị, “Obi dị anyị ụtọ ịmalite ụgbọ elu ọzọ ogologo oge nke na-eburu ahụmịhe ndị njem gaa n’ọkwa ọhụrụ site na ị nweta njikọ dị n’etiti West Africa na West Coast nke USA. N'ime ụgbọ elu anyị n'okporo ụzọ ọhụrụ, ndị njem ga-enwe ọ enjoyụ oge niile, onyinye mmeri na ụgbọ elu B-787 Dreamliner kachasị elu. N'ikwekọ n'okporo ụzọ uto anyị, Ọhụụ 2025, anyị ga-agbasawanye mmekọrịta anyị na mba ụwa buru ibu, ma mepụta nhọrọ njikọ ikuku ka mma n'Africa yana n'etiti Africa na ụwa ndị ọzọ. "
Onye ndu ụgbọelu Africa, bụ Ethiopian Airlines, na-agbasawanye ebe ọ ga - aga mba ụwa ugbu a karịa 116. Manchester, Moscow, Istanbul na Mogadishu bụ ụfọdụ n'ime ebe ọhụrụ ụgbọ elu ahụ ga-amalite n'oge na-adịghị anya.